Ganacsiga Suuqa Bakaaraha Oo Maalintii Labaad Xiran. – Bogga Calamada.com
Ganacsiga Suuqa Bakaaraha Oo Maalintii Labaad Xiran.
Dhammaan goobaha ganacsiga suuqa Bakaaraha ayaa maalintii Labaad xiran kadib markii ganacsatada suuqa Bakaaraha ay shalay ku dhawaaqeen shaqa joojin rasmi ah.
Waddooyinka waaweyn ee soo gala suuqa Bakaaraha ayaa ah kuwa haawanaya kuwaas oo kamid ahaa meelaha ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho.
Kumanaan qoys oo danyar ah ayaan heysan wax ay cunaan kuwaas oo noloshoodu ku tiirsaneed waxa ay kasoo xoogsadaan suuqa Bakaaraha oo ah suuqa ganacsi ee ugu weyn dalka Soomaaliya.
Shirkadaha waaweyn iyo dukaamada ganacsiga ayaa dhammaantood albaabadu ulaabanyihiin waxaana la arkayaa dad farabadan oo waddooyinka suuqa ku lugeynaya kuwaas oo la’ meel ay ka tukaameystaan.
Waxaa fashilmay kulan dhaxmaray guddiga ganacsatada iyo sarraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda Kooxda Ridada, ganacsatada ayaa diiday lacago dheeri ah oo lagusoo kordhiyay lacagihii canshuuraha ahaa ee horay looga qaadi jiray.
Murtad Cabdi Raxmaan Ducaale Beylle oo ah wasiirka maaliyadda ayaa ganacsatada u sheegay in ay qasabtahay bixintan lacagtan oo ah shardi ay ku xirtay Hay’adda lacagta adduunka IMF-ta oo maamulka Farmaaho ay doonayaan in ay ka qaataan lacago Dayn ah.
Qaar kamid ah ganacsatada magaalada Muqdisho oo warbaahinta lahadlay ayaa iyana ku adkeystay in uu sii xirraan doono suuqa Bakaaraha illaa inta laga joojinayo lacagaha dheeriga baada ah ee la dul dhigay.
Waddooyinka soo gala magaalada Muqdisho iyo kuwa gudaha magaalad waxaa daadsan isbaarooyin gaadiidka dadweynaha lacago baad ah looga qaado oo ay dhigteen maleeshiyaadka dowladda balse isbaarooyinkaas lacagaha kasoo xarooda waa ku filnaan waayeen waxayna usoo dhigteen in lacago kale ka qaadaan ganacsatada.
Arrimaha ay ganacsatadu soo bandhigeen waxaa kamid ah in badeecado lagusoo canshuuray dekadda iyo garoonka hadane canshuur kale ladul dhigay marka lageeyo gudaha suuqa Bakaarah,waxeyna tani muujineysaa in maamulka Farmaajo uu sii labo laabay dhaca,dilk,xariga,kufsiga iyo guud ahaan dhibaatooyinka har iyo habeen ay u geystaan dadka shacabka.